Version 5.0.2 မှာ Quotations အသစ် ပါဝင် လာ ပါသည်။ invice ပို့ခြင်း ငွေချေခြင်း အပိုင်း တို့နှင့် တွဲလျှက် အရောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Pending:သည် quotation မှ ပစ္စည်း စာရင်းသွင်းပြီးစေကာမူ customer ထံသို့ မပို့ရသေး ဟု ရည်ညွှန်း ပါသည်။
Sent: သည် ပစ္စည်းစာရင်း ဘောက်ချာမှ customer ထံသို့ အီးမေးပို့ပြီး /ပစ္စည်းပို့ပြီးဟု ရည်ညွှန်းပါသည်။
Completed: သည် quotation မှ ပစ္စည်း စာရင်း သွင်းပြီး စေကာမူ customer ထံသို့E Mailပို့ပြီး ပစ္စည်းပို့ပြီး အားလုံးပြီးမြောက်ပြီလို့ ရည်ညွှန်း ပါသည်။
ယခုVersion 5.0.2 သည် အသုံးပြု လွယ်ကူ စေရန် လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်စွက် ထား ပါသဖြင့် တစ်ချို့သော အရာများ ကို လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့် သေသေ ချာချာ လိုက်နာ လုပ်ဆောင် ပေးဖို့ အထူး မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
မိမိတို့ရဲ့ အရောင်း စာရေး နှင့် အခြားသော ၀န်ထမ်း များကို သက်ဆိုင်ရာ အကောင့် များ ပြုလုပ်ကာ မိမိ ကိုယ်ပိုင် အကောင့် များ ဖြင့် အသုံးပြု စေချင် ပါသည်။ အကြောင်းမှာ တစ်စုံ တရာ စာရင်း များ မှားယွင်း မှု ရှိလာပါက လွယ်ကူစွာ အဖြေ ရှာနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Add Product New !!!! အရင် Version အဟောင်း တွေ မှာ ပါသည့် Product အသစ် ထည့်သည့် အခါတွင် Quantity ကို တိုက်ရိုက် ထည့် သည့် လုပ်ငန်း စဉ် ကို ယခု Version 5.0 up မှာ မ ပါ ၀င် တော့ပါ။ Product ထည့်ပြီး ချိန်တွင် အ၀ယ် စာရင်း နေရာ မှာ အ၀ယ် စာရင်း ကို ထည့်မှ Quantity ကို ရရှိ မှာပါ။ အကြောင်း မှာ လူကြီးမင်း တို့၏ စာရင်း ကို တိကျ မှန်ကန် မှု ရှိစေရေး အတွက် လုပ်ဆောင် ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Add Purchase or Add Payment !!! အ၀ယ် စာရင်း သွင်းပြီး သော အခါ တွင် အ၀ယ် စာရင်း ၏ ဘောက်ချာ သည် Payment Status နေရာမှာ Pending လို့ ပြ နေ ပါ မည်။ Add Payment ကို အသုံး ပြု ပေးပါ။ အကြောင်း မှာ Add Payment ကို အသုံး မပြု ဘူး ဆိုရင် လူကြီးမင်း အ၀ယ် စာရင်း ၏ ငွေကြေး ရှင်းလင်း မှု မရှိသည့် အတွက် စာရင်း ချုပ် အစီရင်ခံစာ Payment Sent နေရာမှာပေါ်လွင်မှာမဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်း ၏ work plan outline ရေး ဆွဲ သည့် အ ခါ တွင် Payment Sent or Payment Status များသည် အရေး ပါသည်။ မိမိ ၏ လုပ်ငန်း ဘယ် အထိ တိုးတက် နေ ပြီ လဲ ဆိုတာ ကို Report Profit and/or Loss နေရာ မှာ ခန့်မှန်း သည့် အချိန် တွင် စာရင်း တိကျ ဖို့လို ပါသည်။
Categories !!! Categories ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စု များ -/-/- မိမိကုန်ပစ္စည်းများကို အုပ်စုအလိုက် Categories များကို ခွဲ နိုင်သလောက် ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားပြီး အသုံးပြုစေချင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပစ္စည်း အ၀င်အထွက် အရောင်းစာရင်း အ၀ယ်စာရင်း ငွေချေမှုများ ငွေကြေးနှင့် ဆိုင်သော အရာများ အားလုံး သော အစီရင်ခံစာ အပိုင်းများ ကုန်ပစ္စည်း ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းများကို ဟာကွက် မရှိအောင် စီမံ ကွပ်ကဲ နိုင်မှာပါ။
လုပ်ငန်စဉ် (၅) Cron Job ကိုအသုံးပြုပါ။
Cron Job ကိုအသုံးပြုပါ။!!! Settings ထဲက System Settings Page အောက်ဆုံး လိုင်းမှာ တည်ရှိသည်။ Cron Job ဆိုတာလေးကို နေ့စဉ် အလုပ်သိမ်းတာနဲ့ ကလစ်ပြီး အသုံးပြု စေချင်ပါတယ် ။ Cron Job ကို နေ့စဉ် အချိန်တစ်ခု သက်မှတ်ပြီး Click လိုက်ပါ။ Cron Job ကို အသုံးပြုခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများမှာ။ Reset reference numbers. Delete older login records junk ဖိုင်တွေရှင်းပေးပါတယ်။ Expire product promotions after end date. buckup database Aouto Send owner email Daily Sales Report. တစ်နေ့တာ စာရင်းကို ပိုင်ရှင်ထံ email ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
Database Restart Date
!!! ကျနော်တို့ HZ POS မှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ Database ကို နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်သည်နှင့် ၁ နှစ် ၁ ကြိမ် Database Restart ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ 1.1.2020 နေ့မှ 30.1.2020 နေ့ အတွင်း Database Restart လုပ်ပေးပါမည်။ Database Restart မလုပ်ခင်3ရက်ကြိုတင် အကြောင်းကြားပါမည်။ လူကြီးမင်း နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သည့် စာရင်း ဇယား ဖိုင်များ Database Buckup ဖိုင်များကို လူကြီးမင်း တို့၏ သက်ဆိုင်ရာ Email မှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ လူကြီးမင်း တို့ဘက်မှ လက်ခံရရှိပြီး စစ်ဆေးလို့ ပြီးမြောက်သည့်အချိန်တွင် လူကြီးမင်း ၏ Database ကို Restart လုပ်ပါမည်။
Database Restart လုပ်ခြင်း၏ အကျိုးရလာဒ်
လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်တွင် မြန်ဆန်မှုရှိခြင်း။
မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ နှစ်ဟောင်း စာရင်း ခွဲခြား စီမံနိုင်ခြင်း။
မိမိလုပ်ငန်းရဲ့၁နှစ်အတိုင်းအတာ ငွေကြေး အပိုင်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။
လုပ်ငန်းရဲ့ ရှေ့ပြေး plan ကို တိကျစွာရေးဆွဲနိုင်ခြင်း။
၁ နှစ်တာ စာရင်းချုပ်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း များဖြစ်ပါသည်။
Database Restart လုပ်ပြီး ကျန်ရှိနေမည့် စာရင်းများမှာ!!!
ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန် အခုရေ စာရင်း။
အ၀ယ်စာရင်း (ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန် အခု အရေ အတိုင်း အ၀ယ် စာရင်း တည်ရှိမည်)။
Categories, Units, Brands, Tax Rates,။
Customer Groups စာရင်းများ ကျန်ရှိနေမှာဖြစ်ပါသည်။
Database စာရင်း အဟောင်းကို အမြဲ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်
လူကြီးမင်း၏ နှစ်ဟောင်း Database စာရင်း အဟောင်းကို အမြဲ ကြည့်ရှု စစ်ဆေး နိုင်အောင် ကျနော်တို့ HZ POS မှ အကောင့် တစ်ခု ပေးထား မှာ ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ စာရင်း ဇယား များကို ဖိုင်လိုက် Email မှ ပို့ဆောင်ပြီး ဆိုကာမူ လူကြီးမင်းတို့၏ နှစ်ဟောင်း စာရင်းများကို Online မှ ပြန်လည် စစ်ဆေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
HZ POS MYANMAR မှ